Samsung Galaxy S8 အသစ်အတွက် Harman Kardon စပီကာ?
၃ လတစ်ကြိမ်မှာ Motorola က Moto Mods အသစ် ၃ ခုထုတ်တော့မည်
Motorola သည် Moto Z အတွက် module များ၏စိတ်ကူးကိုနှစ်သက်ပြီးပုံနှိပ်စက်အတွက်တစ်နှစ်လျှင်မော်ဒယ်အသစ် ၁၂ ခုကိုထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်သည်။
စျေးကွက်နှင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ BlackBerry အတွက်နေရာတစ်ခုရှိပါသလား။
ဒီနေ့စျေးကွက်ထဲမှာရော၊ မကြာခင်မှာစျေးကွက်ထဲမှာနောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်လာမယ့် BlackBerry စက်ပစ္စည်းတွေအတွက်နေရာရှိသလားဆိုတာကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တွေးမိသည်။
၎င်းတို့သည် Android 7.0 Nougat သို့အဆင့်မြှင့်တင်မည့်စမတ်ဖုန်းများဖြစ်သည်
Android 7.0 Nougat သည်ယခုအခါတရားဝင်ဖြစ်လာပြီ။ နောက်ဆုံးပေါ်စမတ်ဖုန်းများစာရင်းကိုပြသမည်။ ထိုအချိန်တွင်ကုန်လွန်သွားသည်နှင့်အမျှ terminal ကိုထည့်သွင်းလိမ့်မည်။
Galaxy Note7၏ပြproblemsနာများသည်ဘက်ထရီအလွန်ကြီးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်
လူတိုင်းက Galaxy Note7၏ပြproblemsနာများကိုမှတ်ချက်ပေးချင်ကြသည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ terminal ၏ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်နိုင်သည့်အကြောင်းရင်းကိုငါတို့သိပြီ။
BlackBerry မာကျူရီ။ အရာကနေဒါကုမ္ပဏီ၏နောက်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်, ဤဆောင်းပါး၌သင်တို့ကိုပြသသောအများအပြားပုံရိပ်တွေအတွက်နောက်ဆုံးနာရီများတွင်မြင်ကြပြီ
Snowden Signal ၏အကြိုက်ဆုံးမက်ဆေ့ခ်ျပို့ app သည် skyrocket ကို download လုပ်သည်
Signal သည်စနိုးဒင်၏အစိုးရမှ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိဘဲလုံခြုံသောစကားပြောဆိုမှုများအတွက်အကြိုက်ဆုံး application ဖြစ်သည်။
Moto X 2017 အသစ်ကိုမည်သို့ပုံဖော်မည်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
လာမည့်နှစ်တွင် Moto X အသစ်နှင့်အချို့ဓာတ်ပုံများပေါက်ကြားခဲ့ဖူးသော်လည်းယခင် ...
Samsung Galaxy A 2016 ကို Nougat အထိအဆင့်မြှင့်တင်လိုက်ပြီဖြစ်သည်
ယခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိမည့် Android ထုတ်ကုန်အများစုသည်နောက်ပိုင်းတွင်မည်သို့နောက်ဆုံးအဆင့်သို့ရောက်ရှိမည်ကိုကြည့်ခြင်း ...
သင့် iPhone 6s သည်ဘက်ထရီအစားထိုးအစီအစဉ်တွင်ရှိ / မရှိစစ်ဆေးပါ
လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်က Apple က iPhone အတွက်အစားထိုးအစီအစဉ်များအကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ သူတို့ထဲကတစ်ခု ...
Android အတွက် 2016 အတွက်အကောင်းဆုံးဂိမ်းများ Google ကပြောကြားခဲ့သည်
ဂူဂဲလ်မှယောက်ျားများသည်အကောင်းဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းများဖြင့်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းကိုသာမက၊ 2016 ၏အကောင်းဆုံးဂိမ်းများနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုလည်းပါဖန်တီးထားသည်
Sony သည် Nougat, Xperia XZ တွင်အဆင့်မြှင့်တင်မှုများပြုလုပ်နေသည်
Android Nougat7မရောက်ရှိသေးသောသတင်းကို Huawei ၏ဆိပ်ကမ်းများသို့ကျွန်ုပ်တို့လွန်ခဲ့သောတစ်ခေါက်ကပေးပို့ခဲ့သည်။
ဂူဂဲလ် Pixel အချို့၏ကင်မရာအပလီကေးရှင်းပျက်ကွက်သည်
လူကြိုက်များသောပထမ ဦး ဆုံးဂူဂဲလ်ထုတ်ကုန်၏ကင်မရာနှင့်ဤရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတွင်ပြseveralနာများစွာရှိသည် ...
Huawei P8 နှင့် Mate S တို့သည် Android 7.0 ဗားရှင်းအသစ်ကိုလက်ခံရရှိမည်မဟုတ်ပါ
ကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်မှထုတ်ပယ်လိုက်သောဤပစ္စည်းနှစ်မျိုး၏သုံးစွဲသူများအတွက်သတင်းဆိုး။ ဒီတစ်ခါ ...
Huawei P10 နှင့်ပတ်သက်သည့်ကောလဟာလများ Buttonless ကွေးမျက်နှာပြင်
တရုတ်ကုမ္ပဏီ Huawei ၏ Huawei P10 ကြယ်ပွင့် terminal အကြောင်းကောလာဟလအသစ်များထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ဒီထဲမှာ ...
Samsung Galaxy C7 Pro သတ်မှတ်ချက်များ
Samsung ဟာ ​​S အကွာအဝေးမှာပဲနေရုံသာမကဒီနေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာကိုရီးယားလူမျိုးတွေဟာ ...
စပိန်နိုင်ငံရှိ Samsung Galaxy Note 90 ကိုပြန်လာသူများအတွက်လက်ဆောင်အဖြစ်ယူရို ၉၀
တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီသည် Galaxy Note7ဆိပ်ကမ်းများနှင့်အတွင်းရှိဖြစ်ရပ်များအတွက်ယနေ့တိုင်လျော်ကြေးပေးနေသည်။
Sailfish OS သည်ရုရှားအစိုးရအတွက် Android အတွက်အခြားနည်းလမ်းဖြစ်သည်
ရုရှားအစိုးရအနေဖြင့် Sailfish OS ကိုရုရှားအစိုးရ၏မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့် operating system တစ်ခုအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုလိုက်သည်
Surface Phone ကိုလာမည့်လတွင်ထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်
တရုတ်နိုင်ငံမှနောက်ဆုံးထွက်ပေါ်လာသောကောလာဟလများအရ Microsoft ၏ Surface ဖုန်းထုတ်လုပ်မှုကိုလာမည့်ဒီဇင်ဘာလတွင်စတင်မည်ဖြစ်သည်။
Xiaomi Mi 6c အသစ်ကိုဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်တွင်ပြသမည်ဖြစ်သည်
Samsung မူပိုင်ခွင့်အသစ်ကပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် terminal ကိုပြသည်
Huawei Mate5သည်အကောင်းဆုံး Android စမတ်ဖုန်းဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်း ၅ ချက်
Huawei Mate9သည်ယနေ့ဈေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံး Android စမတ်ဖုန်းဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြသရန်အကြောင်းပြချက် ၅ ခုနှင့်အတူနိဂုံးချုပ်လိုက်သည်။
Xiaomi သည်စမတ်ဖုန်းများနှင့်အတူယူရိုငွေတစ်လုံးတည်းကိုဘာကြောင့်မရသည့်အပြင် iota တစ်မျိုးတည်းကိုဘာကြောင့်ဂရုမစိုက်တာလဲဆိုတာကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမည်
Xiaomi သည်စမတ်ဖုန်းများရောင်းချခြင်းမှယူရိုငွေတစ်လုံး ၀ င်ငွေမရသဖြင့်၎င်း၏ရည်မှန်းချက်မှာကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။
Surface ဖုန်းသည် Snapdragon 835 ကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်
မိုက်ကရိုဆော့ဖ်၏ Surface ဖုန်းအကြောင်းကောလဟာလများဆက်လက်ထွက်ပေါ်နေပြီးဤအချိန်၌၎င်းသည် Snapdragon 835 ပရိုဆက်ဆာတပ်ဆင်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အားပြောခဲ့သည်။
Xiaomi မှနောက်ဆုံးထုတ် OTA update ကို Android process များတွင်ပြသနာရှိသောထောင်ပေါင်းများစွာသောထုတ်ကုန်များကိုပိတ်ဆို့ထားသည်။
Galaxy S8 တွင်အများဆုံး 256 GB သိုလှောင်နိုင်သည့်ပမာဏရှိသည်
ဘာစီလိုနာရှိ MWC တွင်ပြသမည့် Samsung Galaxy S8 သည်အတွင်းသိုလှောင်မှုပမာဏ ၂၅၆ GB ရှိလိမ့်မည်။
Android Nougat သည် Nexus သို့ဒီဇင်ဘာလတွင်လာမည်
Google သည် Android Nougat အားလာမည့်ဒီဇင်ဘာလတွင် Nexus အမျိုးအစားသို့ရောက်ရှိလာလိမ့်မည်ဟုတရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်။
Sharp သည် Star Wars ၌စိတ်ကြိုက်စမတ်ဖုန်းနှစ်ခုကိုစတင်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင်ရုပ်ရှင်အသစ်ဖြစ်မည့် Rogue One ၏ Premiere နှင့်အလွန်နီးစပ်သည်။
၎င်းတို့သည် Samsung Galaxy C9 Pro အသစ်၏သတ်မှတ်ချက်များဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Samsung မှစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ကိရိယာတစ်ခုရောက်ရှိလာခြင်းနှင့်ရင်ဆိုင်ရသည်။ ဤကိစ္စတွင် Samsung C9 Pro အသစ်ဖြစ်သည်။
LG G6 အတွက်ဖြုတ်လို့ရတဲ့ဘက်ထရီလား။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင်ရောက်ရှိနေပြီးလက်ရှိ LG G5 ၏သက်တမ်းတိုးမှုသည်ပိုမိုနီးကပ်စွာဖြစ်လာသည်။ သတိရပါ
လာမည့် Nokia စမတ်ဖုန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ဆုံးကောလာဟလများအရ Snapdragon 820 မှ 2k မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်မည်ဟုဆို
Huawei P10 ကိုထူးခြားသောဒီဇိုင်းကိုပြသသည့်ပုံများတွင်ပြန်လည်တွေ့မြင်နိုင်သည်
Huawei သည် P10 တွင်အလုပ်လုပ်နေပြီးမကြာသေးမီနာရီများအတွင်းပုံရိပ်များတွင်ထပ်မံမြင်တွေ့ရပြီးကွေးသောမျက်နှာပြင်နှင့်ထူးခြားသောဒီဇိုင်းကိုပြသထားသည်။
Glossy Black Galaxy S7 Edge ရဲ့ပထမဆုံးပုံရိပ်တွေ
Galaxy S7 ရဲ့ပထမဆုံးပုံရိပ်တွေကို Apple မှပြောသလိုပြောင်လက်နေတဲ့အနက်ရောင်ဒါမှမဟုတ် Jet Black နဲ့ပြသပါမယ်
Samsung J3 2017 နှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်အသစ်များသည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ကျဆင်းသွားသည်
Samsung သည် Trend သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး Glossy Black Galaxy S7 ကိုလာမည့်နေ့ရက်များတွင်ကြေငြာမည်
Samsung သည် glossy black ကိုတီထွင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးလာမည့်ရက်များ၌လူကြိုက်များသည့်အရောင်ဖြင့် Galaxy S7 ကိုကြေညာမည်။
Microsoft နှင့် HP သည် Windows Phone ဖြင့် terminal ကိုပြန်လည်စတင်မည်
အမေရိကန်ကုမ္ပဏီများဖြစ်သော Microsoft နှင့် HP သည်မကြာမီတွင် Mid-range terminal ကိုစတင်တော့မည်
Xiaomi Mi Mix ကိုအဖြူရောင်ဖြင့်စီစစ်ထားသောပုံများတွင်တွေ့ရသည်
Xiaomi သည် Mi Mix ဗားရှင်းအငယ်စားရှိရုံသာမကစျေးကွက်တွင်အဖြူရောင်ဖြင့်မြင်တွေ့ရမည့် terminal ကိုလည်းတွေ့နိုင်သည်။
Galaxy beta ပရိုဂရမ်အသုံးပြုသူများသည် Gear VR ကိုမခံစားနိုင်ပါ
Android Nougat beta Galaxy S7 နှင့် Galaxy S6 အတွက် beta များသည် Gear VR မျက်မှန်များနှင့်လက်ရှိသဟဇာတမရှိကြပါ။
YouTube Kids ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပြီးယခုတွင်သင်သည်ဗီဒီယိုများနှင့်ချန်နယ်များကိုပိတ်ဆို့ရန်ခွင့်ပြုသည်
"Touch disease" နှင့်သက်ဆိုင်သည့် iPhone6Plus အတွက်ပြုပြင်ရေးအစီအစဉ်
Xiaomi Mi Mix အသစ်နှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကျဆင်းသည့်စမ်းသပ်မှုတစ်ခု
Xiaomi ၏ထုတ်ကုန်အသစ်ဖြစ်သော Mi Mix နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ၀ မ်းသာပါသည်။
၎င်းတို့သည်အောက်တိုဘာလတွင်စျေးကွက်အတွင်းတွင်အင်အားအကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းများဖြစ်သည်ဟု AnTuTu မှပြောကြားခဲ့သည်
၎င်းတို့သည်အောက်တိုဘာလတွင်စျေးကွက်ထဲတွင်အကျယ်ပြန့်ဆုံးသောစမတ်ဖုန်း ၁၀ ခုဖြစ်သည်။ နာမည်ကြီးပြီးကျော်ကြားသော AnTuTu ၏အဆိုအရ။
ဒီဆောင်းပါးမှာ Xiaomi အကြောင်းသိချင်တဲ့အချက် ၅ ချက်ကိုအခုသင်ပြောပြပါမယ်။ သင်အခုထိမသိသေးတဲ့အပြင်သင့်ကိုအံ့အားသင့်စေမှာပါ။
Xiaomi သည် Mi MIX Mini စတင်ရန်ပြင်ဆင်နေသည်
Mi Mix အောင်မြင်မှုအပြီးတွင် Xiaomi သည် ၅.၅ လက်မမျက်နှာပြင်မရှိသော Mi Mix Mini ကိုစတင်ရန်ပြင်ဆင်နေပြီးဖြစ်သည်။
ဒီဇင်ဘာလတွင် OnePlus 7T နှင့် OnePlus3အတွက် Android3Nougat
အသစ်ဖြန့်ချိသော OnePlus 3T နှင့်အဟောင်း OnePlus3ဒီဇင်ဘာလတွင် update ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
Huawei P10 ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ပေါက်ကြားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က Mate9ကိုတင်ဆက်ခဲ့သော်လည်း Huawei သည်၎င်း၏ flagship အသစ်ဖြစ်သော P10 ကိုပုံများစွာတွင်တွေ့မြင်ခဲ့ရပြီးဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းသည်ဇွန်လ ၃၀ ရက်၊ ၂၀၁၇ တွင်အဟောင်းသုံးစက်များပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းကိုရပ်တန့်သွားလိမ့်မည်။
OnePlus 3T အသစ်သည်ဈေးနှုန်းသက်သာပြီးယူရို ၄၃၉ ဖြင့်ရောင်းချသည်
OnePlus 3T သည်တရားဝင်ရှိပြီးသားဖြစ်ပြီးယူရို ၄၃၉ ဖြင့်စျေးကွက်တွင်မကြာမီရောင်းချတော့မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ OnePlus 439 နှင့်အတူခြားနားချက်များ?; အနည်းငယ်သာ
App Store သည်အက်ပလီကေးရှင်းများမှအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပယ်ဖျက်ခြင်းကိုစတင်ခဲ့သည်
လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကအက်ပလီကေးရှင်းတွင်ကြေငြာခဲ့သောသန့်ရှင်းရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကြာရှည်စွာမွမ်းမံထားသောအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ဂိမ်းများကိုဖယ်ရှားရန်အက်ပဲလ်အနေနှင့်စတင်အလေးအနက်ထားလာသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအဆိုအရ Samsung သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော Galaxy Note7ကိုရောင်းချနိုင်သည်
iPhone7နှင့် iPhone7Plus ဝယ်လိုအားကျဆင်းသွားသည်
လေ့လာဆန်းစစ်သူ Ming-Chi Kuo ၏အဆိုအရနို ၀ င်ဘာနှင့်ဒီဇင်ဘာလများတွင် iPhone7နှင့် iPhone7Plus အသစ်များဝယ်လိုအားကျဆင်းသွားသည်
Huawei Mate9Pro ကိုကွေးညွှတ်သည့်မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည်
မနေ့က Huawei Mate9Pro ရဲ့ filter အချို့ကိုပဲ့တင်ထပ်လိုက်တယ်။ ဒီနေ့တရားဝင် terminal ကိုဈေးကွက်ထဲရောက်တော့မှနိုးလာတယ်။
Meizu Pro7အသစ်နှင့်ပတ်သက်သည့်ကောလာဟလများသည်ကွန်ရက်ပေါ်တွင်ပျံ့နှံ့နေသည်
Meizu သည်ဤတင်းကျပ်သောစမတ်ဖုန်းဈေးကွက်တွင်မြေနိမ့်ကျခြင်းကိုမလိုလားပါ။ သို့သော်အမှန်အတိုင်းပြောရလျှင် ...
Acer Jade Primo ကိုပြန်ရောင်းပြီး Microsoft စတိုးတွင်ရောင်းလိုက်သည်
Acer ကုမ္ပဏီသည် Windows 10 ဖြင့် terminal ၏စျေးနှုန်းကို ၂၄၉ ယူရိုဖြင့်လျှော့ချခဲ့ပြီး၎င်းသည်လျင်မြန်စွာရောင်းထွက်ခဲ့သည်။
ဒီနေ့ WiFi ခေါ်ဆိုမှုတွေဟာလူကြိုက်များလာတယ်၊ ဒီအထူးဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းယနေ့ပြောပြပါမယ်။
Samsung သည် Galaxy S6 နှင့် S6 Edge ကို Android Nougat သို့အဆင့်မြှင့်တင်မည်
ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Samsung သည် S7, S6 Edge နှင့် S6 Edge Plus terminal များအတွက် Android6ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်လုပ်ဆောင်နေသည်
Huawei Mate9Pro သည်ကွေးသောမျက်နှာပြင်ပါရှိပြီးပုံရိပ်များကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်
Huawei သည် Mate9ဗားရှင်းအသစ်ကိုပြင်ဆင်နိုင်ပြီး၎င်းသည်ကွေးသောမျက်နှာပြင်နှင့်အတူ Huawei Mate9Pro အမည်ဖြင့်နှစ်ခြင်းခံမည်ဖြစ်သည်။
2017 ၏ iPhone သည် ၅ လက်မနှင့် ၅.၈ လက်မဖန်သားပြင်များကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်
အမှန်တရားကတော့ iPhone ကောလာဟလတွေအကြောင်းပြောရရင်ဒါမှမဟုတ်အောက်ပါ iPhone မော်ဒယ်တွေအကြောင်းပြောရင်ငါတို့မှာ ...
UMi Plus E သည် 6GB RAM ကိုထပ်ပေါင်းထည့်သည်
ဒီတစ်ခါမှာတော့ Umi ရဲ့အလှည့်အပြောင်းမှာပါတဲ့သေနတ်ကိုင်ကိရိယာဖြစ်တဲ့ Plus Plus E ဟာသေနတ်ကိုင်ကိရိယာနဲ့အတူအတော်အသင့်ရပ်တည်နေပါတယ်
OnePlus 3T သည် 8GB RAM ထည့်သွင်းသောပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းဖြစ်သည်
ဒါကောင်းလား၊ ဆိုးလားဆိုတာမရှင်းဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ RAM သုံးစွဲမှုမြင့်မားနေလို့ပါ။ ဒါပေမယ့် ...
၅.၅ လက်မမျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသော HTC Bolt နှင့် Android Nougat သည်ယခုတရားဝင်ဖြစ်သည်
ကောလဟာလများထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက် HTC Bolt သည် ၅.၅ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့် Android Nougat နှင့်တရားဝင်ဖြစ်သည်။
Intex Aqua S9 Pro သည်စျေးကွက်တွင် ၁၃၉ ယူရိုရှိပြီးစျေးကွက်ထဲရောက်ရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောမိုဘိုင်းပစ္စည်းသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ယခုအခါ Xiaomi Mi Mix ကို GearBest မှတဆင့်ယူရို ၅၉၃ ဖြင့်ယူထားနိုင်သည်
တရားဝင်တင်ဆက်ပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Xiaomi Mi Mix ကို GearBest မှတဆင့်ယူရို ၅၉၃ ဖြင့်ကြိုတင်ယူထားနိုင်သည်။
HTC Bolt နှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်၎င်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များပေါက်ကြားခဲ့သည်
စျေးကွက်အတွက်ကုမ္ပဏီပြင်ဆင်နေသည့် HTC ၏နောက်ဆုံးပေါ်အဆင့်မြင့်ကိရိယာဖြစ်သည့် HTC Bolt သည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များပေါက်ကြားခဲ့သည်။
Qualcomm မှ Next One အတွက်ပရိုဆက်ဆာအသစ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသလိုက်သည်
OnePlus ၏ထုတ်ကုန်အသစ်များသည်၎င်း၏မြင်ကွင်းများတွင်အမြဲရှိနေပြီးနောက်တစ်ကြိမ်တွင်ယိုစိမ့်မှုသည် ...
Xperia XZ ၏ခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှုများသည်ပလတ်စတစ်များစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့သည်
Xperia XZ ၏စျေးနှုန်းနှင့်အင်္ဂါရပ်များလက်ကိုင်ဖုန်းတွင် Xperia XZ သည်ပိုနှစ်သက်သောပလပ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများရှိသည်
၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာကောလဟာလတွေအရ iPhone SE ရှိမှာမဟုတ်ဘူး
iPhone7ကိုဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိပြီးသည့်နောက်တွင် Apple ၏အစီအစဉ်များသည် 2017 ခုနှစ်တွင် iPhone SE ကိုစတင်ရန်မပါ ၀ င်ပုံရသည်။
နယူး Xiaomi Redmi 4A ကိုယူရို ၇၀ ဖြင့်ရောင်းချသည်
Xiaomi (ရှောင်မီ) ၏အခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်သွားသောတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့မထားရှိပါ။ ဤတစ်ကြိမ်တွင်သူတို့ဝတ်ဆင်ခဲ့သည် ...
Huawei Mate9Vs Samsung Galaxy Note 7၊ ပျောက်ပလ္လင်ကိုရှာဖွေသည်
ဒီနေ့မှာတော့ Huawei Mate9နဲ့ Galaxy Note7မျက်နှာပြင်ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ထားပြီး Phablets တွေရဲ့ထိုင်ခုံမှာနေရာထိုင်ခင်းအသစ်ရှိမရှိသိရအောင်။
၁၀ စက္ကန့်တွင် Xiaomi သည် Mi MIX အားလုံးကိုရောင်းရန်လိုအပ်သည်
နောက်ထပ်မှတ်တမ်းတစ်ခုမှာ Xiaomi Mi MIX ၏ယူနစ်အားလုံးကိုရောင်းရန် ၁၀ စက္ကန့်သာကြာခဲ့သည်။
၎င်းသည်အာရှကုမ္ပဏီ၏အဆင့်မြင့် Huawei Mate9ဖြစ်သည်
တရုတ်ကုမ္ပဏီဟွာဝေသည်ယခုနှစ်တွင်ပေါက်ကွဲမှုပိုမိုများပြားလာပြီး အကယ်၍ ၎င်းသည် ...
Xiaomi သည် Xiaomi Mi Mix နှင့်အတူ Apple သို့ Samsung သို့သွားရာလမ်းကိုပြသခဲ့သည်
Xiaomi Mi Mix သည်အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး Apple နှင့် Samsung ကဲ့သို့သောအခြားထုတ်လုပ်သူများထံမှလမ်းကိုပြသနိုင်သည့်လမ်းဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။
Lenovo Phab2 Pro သည်ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းဖြစ်ပြီး Project Tango ပါဝင်သည်
Lenovo Phab2 Pro သည်ယခုအခါတရားဝင်ဖြစ်လာပြီး Google မှ Project Google ဖြင့်ကမ္ဘာ့ပထမ ဦး ဆုံးစမတ်ဖုန်းအဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။
Xiaomi Mi Note2၏စတော့အသစ်သည်စက္ကန့် ၅၀ အတွင်းကုန်သွားသည်
Xiaomi Mi Note2ကို flash ရောင်းချခြင်းက၎င်းသည်ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုဖြစ်ကြောင်းနှင့်စတော့ရှယ်ယာသည်စက္ကန့် ၅၀ သာကြာမြင့်ကြောင်းရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြခဲ့သည်။
စျေးကွက်ထဲတွင်အကောင်းဆုံးအလယ်အလတ်တန်းစားစမတ်ဖုန်း ၅ ခု
ဒီနေ့ဒီစျေးကွက်ထဲရှိအကောင်းဆုံးအလယ်အလတ်တန်းစားစမတ်ဖုန်းများ၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဆောင်းပါး ၅ တွင်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြပါမည်။
OnePlus4သည် Snapdragon 830 ကိုတပ်ဆင်။ လာမည့်နွေရာသီတွင်ဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိနိုင်မည်
OnePlus4နှင့်ပတ်သက်သည့်ပထမဆုံးကောလာဟလများသည်ကွန်ရက်များ၏ကွန်ယက်ကိုဖြန့်ဝေပြီးလာမည့်နွေရာသီတွင်ဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိနိုင်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။
LG G5 သည်ထူးခြားသောကင်မရာပါ ၀ င်သည့် modular စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် LG G5 ကိုစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန်းစစ်လေ့လာမှုနှင့် LG flagship ၏ထင်မြင်ချက်ဖြစ်သည်၊
Meizu M5 ဟာတရားဝင်ပြီးသားဖြစ်ပြီးယူရို ၁၀၀ ကျော်လောက်တန်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ဖို့သင်ကုန်ကျလိမ့်မယ်
Meizu M5 သည်တရား ၀ င်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်၎င်း၏ဈေးနှုန်းများအတွက်ယူရို ၁၀၀ ကျော်သာဖြစ်သည်။
Lenovo က Apple ၏နောက်ဆုံးပေါ် Moto Z ကြေညာချက်တွင်လှောင်ပြောင်သရော်ခြင်းဖြစ်သည်
Lenovo မှကြေငြာချက်အသစ်တစ်ခုကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီး၎င်းသည် Apple မှပုန်းအောင်းနေစရာမလိုဘဲရယ်မောရသော Moto Z ၏ဤဆောင်းပါး၌ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အားပြသနေပြီဖြစ်သည်။
ဤရွေ့ကား Samsung Galaxy S7 ကိုအစွန်း Coral အပြာရောင်၏ပထမ ဦး ဆုံးပုံရိပ်တွေဖြစ်ပါတယ်
အချို့သောကောလဟာလများအပြီးတွင် Samsung Galaxy S7 အစွန်း Coral Blue ၏ပထမဆုံးတရားဝင်ပုံရိပ်များကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်ပါပြီ။
Energy Phone Neo 2၊ အခြေအနေအားလုံးအတွက်နောက်ကောက်ကျသောစျေးနှုန်း
စွမ်းအင်စနစ်နောက်လာမည့် ၂၀၁၇ တွင်စွမ်းအင်စနစ်မှတင်ပြသောထုတ်ကုန်များနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်။
စွမ်းအင်တယ်လီဖုန်းမက်စ် 2+ သည်အလယ်အလတ်အကွာအဝေးတွင်ရှိသည်
ဒီနှစ်ခရစ်စမတ်မှာစိတ်ပျက်စရာကောင်းမယ့် Energy Sistem phablet ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ပြီးပါပြီ၊ ပြီးတော့ငါတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောပြချင်ပါတယ်။
၃၄ မိနစ်အတွင်းတွင် ATL သည်၎င်း၏ဘက်ထရီအားလုံးကိုအားသွင်းရန်ပြသသည်
၃၄ မိနစ်အတွင်းအားသွင်းနိုင်သည့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက် ATL သည်၎င်း၏ဘက်ထရီအသစ်များ၏ထူးခြားသောလက္ခဏာများကိုကြေငြာခြင်းအတွက်ဂုဏ်ယူသည်။
ယခုတွင် Xiaomi Mi Note2နှင့် Xiaomi Mi Mix ကိုကြိုတင်စာရင်းသွင်းနိုင်သည်
Xiaomi Mi Note2နှင့် Xiaomi Mi Mix တို့ကိုတရုတ်ထုတ်ကုန်များတရားဝင်တင်သွင်းပြီးသုံးရက်အကြာတွင်ကြိုတင်မှာယူထားနိုင်သည်။
Samsung Galaxy A5 (2017) ၏ပထမဆုံး rendering
Xiaomi Mi Mix သည် ၆.၄ လက်မစမတ်ဖုန်းဖြစ်ပြီးဘောင်မရှိဘဲ
Xiaomi သည် ၆.၄ လက်မစမတ်ဖုန်း Xiaomi ကို၎င်း၏ရှေ့မျက်နှာပြင်တွင်ဘောင်မပါဘဲပြသခြင်းဖြင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။
Huawei သည် Mate9အသစ်ကိုပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုးဖြင့်၎င်း၏မြန်နှုန်းကိုပြသသည့်ပိုစတာကိုထုတ်ဝေသည်
Huawei Mate9သည်လက်တွေ့ကျပြီးဖြစ်သည်။ တရုတ်ထုတ်လုပ်သူသည်ဖုံးကွယ်မထားသည့်အပြင်၎င်း၏အမြန်နှုန်းဖြင့်ဖော်ပြသော terminal ၏ပိုစတာကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။
Xiaomi Mi Note2သည်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းပြီးနောက်တရားဝင်ဖြစ်သည်
စောင့်ဆိုင်းရတာကြာပြီဖြစ်ပေမယ့်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Xiaomi Mi Note2ဟာတရားဝင်ပြီးသားဖြစ်လို့ဘယ်သူ့ကိုမှစိတ်မပျက်စေချင်ဘူး
Samsung က Galaxy Note 8 ကိုဖြန့်ချိမယ်လို့အတည်ပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်
Samsung Galaxy Note7၏ပြနာသည်ယနေ့အထိဆက်လက်ရှိနေပြီးအစီရင်ခံစာအရ ...
LG V20 ကင်မရာဖန်ခွက်ပြတ်တောက်မှုတိုးလာ
LG မော်ဒယ်သစ်များအနက်မှတစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သော LG အသုံးပြုသူများသည် ...
သူတို့က Google Pixel ကိုကွေး၊ ဆန့်ကုတ်ခြစ်ခြင်း၊ ခြစ်ခြင်း၊ ဂူဂဲလ်ဖုန်းသည်ဒဏ်ရာများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်
ဤရွေ့ကား Google Pixel XL ကိုမှအခြားရွေးချယ်စရာတိုးတက်မှုအချို့
ယနေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးကွက်တွင်ယနေ့ရှာတွေ့နိုင်သည့် Google Pixel XL အတွက်အကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းများကိုသင်ပြပါမည်။
Samsung က Galaxy Note7ပေါက်ကွဲစေတဲ့ပြtheနာကိုရှာမတွေ့သေးဘူး
Samsung က Galaxy Note7ပေါက်ကွဲစေသည့်ပြproblemနာကိုရှာဖွေနေဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော်ယခုအချိန်အထိ၎င်းတို့မတွေ့နိုင်သေးပါ။
Xiaomi Mi Note2ကိုယိုစိမ့်နေသောပုံတွင်ထပ်မံတွေ့ရသည်
တင်ဆက်ပြီးနှစ်ရက်အကြာတွင် Xiaomi Mi Note2သည်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာဒီဇိုင်းကိုတန်ဖိုးထားနိုင်သည့်စစ်ထုတ်ထားသောပုံသဏ္newာန်အသစ်တွင်ထပ်မံတွေ့မြင်ရသည်။
Huawei Nova သည် Google ၏အစီအစဉ်များကိုပြောင်းလဲသည့်အချိန်အထိ Nexus 2016 ဖြစ်လိမ့်မည်
Huawei Nova သည် Nexus 2016 ဖြစ်မည်ဖြစ်သော်လည်းတရုတ်ထုတ်လုပ်သူနှင့် Google တို့အကြားသဘောတူညီချက်ပျက်ပြားသွားပြီး Google Pixel သည်မြင်ကွင်းတွင်ပေါ်လာသည်။
iFixit တွင် Google Pixel အသစ်ရှိပြီး၎င်းကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်လွယ်ကူသည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂူဂဲလ်ထုတ်ကုန်အသစ်များနှင့် ၀ င်ရောက်မလာသေးသောသတင်းများလက်တစ်ဆုပ်စာကိုတွေ့မြင်နေရသည်။
LG G6 သည်လက်ရှိ LG G5 တွင်တွေ့ရသော module များကိုဘေးဖယ်ထားလိမ့်မည်
LG model အသစ် G5 ကိုယခုနှစ်ဘာစီလိုနာရှိ MWC တွင်ပြသခဲ့စဉ်က ...
Xiaomi Mi Note2မှာ Samsung Galaxy Note7ရဲ့နှစ်ဆကွေးကွေးတစ်ခုပါရှိသည်
Xiaomi Mi Note3၏တရားဝင်တင်ဆက်မှုအတွက် (၃) ရက်မျှမကျန်ရှိတော့ပါ။
Moto G4 နှင့် Moto G4 Plus တို့သည်မကြာမီ Android Nougat 7.0 ကိုရရှိတော့မည်ဖြစ်သည်
တရားဝင်ဖြစ်ပြီးတရားဝင် Lenovo ကိုယ်တိုင်က Moto G4 နှင့် Moto G4 Plus ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်ဟုအတည်ပြုလိုက်သည်။
Galaxy Note7မတိုင်ခင်နှင့်ပြီးနောက်တွင် Samsung ကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါသလား။
Galaxy Note7ဟာ Samsung ရဲ့သမိုင်းမှာအကြီးအကျယ်အပြစ်အနာအဆာဖြစ်ခဲ့ပြီးတောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီကိုဆက်ပြီးယုံကြည်မှုရှိ၊
Samsung က၎င်း၏အနာဂတ်ဖုန်းများ၏ RAM ကို 8 GB အထိမြှင့်တင်လိမ့်မည်
Samsung မှ၎င်း၏စမတ်ဖုန်းနောက်မျိုးဆက်သည် 8 GB RAM ဖြင့်ဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်မျှော်လင့်ထားသည့် Xiaomi Mi Note2၏စျေးနှုန်းကိုစစ်ထုတ်သည်
တရားဝင်တင်ဆက်ပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် Xiaomi Mi Note2၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်စျေးနှုန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့သိရှိထားပြီးဖြစ်သည်။
Meizu Pro 6s, Meizu Pro6ဆိုတာဘာလဲ
ဤဆိပ်ကမ်းများထဲမှတစ်ခုကိုဝယ်ယူရန် Meizu တွင်အချက်များစွာရှိကြောင်းသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ။
Nexus 6P စျေးနှုန်းဟာသူတို့စတော့ရှယ်ယာရှိတဲ့နေရာမှာဆက်ပြီးကျဆင်းနေတယ်
တရား ၀ င်အတည်ပြုပြီးသည့်နောက် Google ၏ Nexus 6P ကုမ္ပဏီ၏အွန်လိုင်းစတိုးတွင်ထပ်မံဖြည့်စွက်ခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းတော့မည်ဖြစ်သည်။
Samsung ကမနက်ဖြန်တွင် Galaxy On မိသားစု၏ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းကိုမိတ်ဆက်မည်
Galaxy Note7ပျက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာ Samsung ဟာပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးနက်ဖြန်မနက်မှာ Galaxy On စီးရီးမှစမတ်ဖုန်းအသစ်တစ်ခုကိုတင်ဆက်ပါလိမ့်မယ်။
Huawei ၏ Kirin 960 ပရိုဆက်ဆာသည်လူအများကြားတွင်နေရာတစ်ခုဖန်တီးလိုသည်
Xioami သည်အောက်တိုဘာ ၂၅ တွင် Mi Note2ကိုတရားဝင်တင်ဆက်လိမ့်မည်
Xiaomi ကအောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်မှာတရုတ်မှာပြုလုပ်မယ့်ပွဲမှာ Xiaomi Mi Note2အသစ်ကိုတင်ဆက်မယ်လို့တရားဝင်ကြေငြာလိုက်ပါတယ်။
Samsung Galaxy S7 သည် Note7မှလုပ်ဆောင်ချက်အချို့ကိုအမွေခံရမည်
Samsung မှာသူတို့ကအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုကတော့ Note7မှာပါတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်အချို့ကိုယူဆောင်ပေးခြင်းဖြင့်၎င်းရဲ့ "ညီဖြစ်သူ" နဲ့သဟဇာတဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။
Xiaomi Mi Note2ကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောပုံများဖြင့်ပြန်လည်တွေ့မြင်နိုင်သည်
Xiaomi Mi Note2ကိုရုပ်ပုံများစွာတွင်ထပ်မံတွေ့ရပြီးသင့်ကိုလုံးဝစိတ်မဝင်စားတော့မည်မဟုတ်
Qualcomm သည် Meizu ကိုသေတ္တာထဲမဖြတ်ဘဲ Panther များအသုံးပြုခြင်းကိုရှုတ်ချသည်
အမေရိကန်ကုမ္ပဏီ Qualcomm သည် Meizu နှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားချက်ကိုလိုင်စင်မပါဘဲအသုံးပြုခြင်းအတွက်ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုများသို့တိုးချဲ့လိုက်သည်။
LV5 ကို LG မှဖြန့်ချိမည့်နောက်နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ဖြစ်သည်
၎င်းသည် LG မှလာမည့်နှစ်တွင်ဖြန့်ချိမည့်အလယ်အလတ်တန်းစား terminal အသစ်ဖြစ်သည့် LV5, fingerprint sensor ပါသည့် terminal
Huawei သည်ယခုနှစ်အတွင်းထုတ်ကုန်သန်း ၁၀၀ ရောင်းချခဲ့သည်
တရုတ်ကုမ္ပဏီ Huawei သည်ယခုနှစ်အတွင်းကမ္ဘာအနှံ့၌ terminal ပေါင်းသန်း ၁၀၀ ရောင်းချပြီးပြီဟုကြေငြာခဲ့သည်။
HTC Bolt ၏ပထမဆုံးပုံများကိုစစ်ထုတ်သည်
HTC ၏နောက်ထပ်အလယ်အလတ်အကွာအဝေး၏ပထမပုံရိပ်များကိုစစ်ထုတ်ပြီး HTC Bolt သည် Google Pixel နှင့်ဆင်တူသည့် terminal တစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်၏ iPhone တွင်နေရာလွတ်ရန်မြန်ဆန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်း ၃
သင့် iPhone တွင်သိမ်းဆည်းခြင်းပြproblemsနာများရှိပါသလားစိတ်မပူပါနဲ့၊ ယနေ့သင့် terminal ကိုနေရာလွတ်ပေးရန်နည်းလမ်းသုံးခုကိုကျွန်ုပ်တို့ပြပါမယ်။
Galaxy Note 90 အသုံးပြုသူ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် Galaxy S7 အစွန်းကိုရွေးချယ်နေကြသည်
Galaxy Note 90 ရှိသည့်သုံးစွဲသူ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် Samsung အတွက်ကောင်းသောသတင်းဖြစ်သော၎င်းကို Galaxy S7 အစွန်းဖြင့်အစားထိုးရန်ရွေးချယ်နေပုံရသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နာရီများအတွင်းမီဒီယာတော်တော်များများသည် OnePlus ကိုရပ်တန့်စေနိုင်သည်ဟူသောဖြစ်နိုင်ခြေကိုသံယောင်လိုက်ကြသည်။
Samsung သည် S7 ပိုင်ရှင်များထံလုံခြုံစိတ်ချရသောအကြောင်းကြားစာပေးပို့ခဲ့သည်
Samsung သည်မကြာသေးမီအချိန်များအတွင်း Galaxy S7 ပိုင်ရှင်များအားလုံးအား၎င်းတို့၏ terminal သည်လုံခြုံမှုရှိသည်ဟုပြောသည့်အကြောင်းကြားစာပေးပို့ခဲ့သည်။
Nokia ရှိဖင်လန်လူမျိုးများသည်လာမည့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်ဘာစီလိုနာ၌ကျင်းပမည့် MWC တွင်တက်ရောက်မည်ဟုတွစ်တာဖြင့်အတည်ပြုခဲ့သည်။
ကနေဒါကုမ္ပဏီသည် BlackBerry DTEK60 ကိုဈေးကွက်တွင်စတင်မိတ်ဆက်ပေးသော terminal အသစ်သည်ပထမဆုံးတရားဝင်ပုံရိပ်များကိုသင့်အားပြသပါမည်။
သင့်မှာ Galaxy Note7ရှိရင်ဘာလုပ်သင့်သလဲ။
Samsung Galaxy Note7သည်သမိုင်းဝင်ပြီးပြီ၊ အကယ်၍ သင့်တွင်ထိုစက်ပစ္စည်းတစ်ခုရှိပါကသင်ဘာလုပ်သင့်သည်ကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြောပြသည်။
Samsung သည် Galaxy Note 17.000 ကိုရုပ်သိမ်းပြီးနောက်သန်း ၁၇၀၀၀ ကျော်ကို ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်
ကိုရီးယားကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ကြယ်ပွင့် terminal Galaxy Note 17.000 ကိုရုပ်သိမ်းခြင်းအတွက်ဒေါ်လာ ၁၇,၀၀၀ မီလျံခန့်ဝင်ငွေကိုရပ်ဆိုင်းတော့မည်ဖြစ်သည်
Samsung Galaxy7ရဲ့ပြcrisisနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ့်ဖြေရှင်းနည်းကဘာလဲ။
Galaxy Note7ရဲ့အကျပ်အတည်းကအခုထိအသက်ရှင်နေဆဲပါ။ ဒီဆောင်းပါးမှာ Samsung ကလုပ်နိုင်တဲ့ဖြေရှင်းနည်းတွေကိုပြောပြပါမယ်။
Samsung Galaxy S7 Edge သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည်
အင်္ဂလိပ်မဂ္ဂဇင်း Mobile Choice က ၂၀၁၆ ခုနှစ်၏အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းအဖြစ် Samsung Galaxy S2016 Edge ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်
Google Pixel XL Vex Nexus 6P သည်ယခင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက
ယနေ့တွင် Nexus Pixel XL နှင့် Nexus 6P တို့ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရသည် (သို့) တူညီသောအရာ၊ ယခုအချိန်တွင်မည်သူ့ကိုမျှလက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိသောပစ္စုပ္ပန်နှင့်ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်သည်။
Galaxy Note7အသစ်သည်မီးလောင်ပြီးဤတစ်ကြိမ်တွင်ဗီဒီယိုဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်
ယနေ့နံနက်က Samsung သည် Galaxy မှထုတ်လုပ်ခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသံယောင်လိုက်သည်။
Samsung အတွက်ပြproblemsနာများဆက်လက်ရှိနေပြီးနောက်ဆုံးနာရီများအတွင်း Galaxy Note7ထုတ်လုပ်မှုကိုရပ်တန့်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
Samsung ၏ Galaxy S8 အသစ်ကိုဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်တွင်ပြသမည်ဖြစ်ကြောင်းပြဇာတ်တစ်ခုကပြသသည်
Samsung Galaxy S8 အတွက်ပရိတ်သတ်ကဒီ terminal အသစ်ကိုဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက်မှာ MWC ရဲ့မူဘောင်မှာပြသနိုင်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်သည်။
ဂူဂဲလ်; Google Pixel ၏စျေးနှုန်းသည်အဘယ်ကြောင့်အလွန်မြင့်မားသနည်း။
Google Pixels ကိုစျေးအလွန်ကြီးသောစျေးနှုန်းဖြင့်တင်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဒီဆောင်းပါးမှာဒီအကြောင်းကိုဆွေးနွေးထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Uhans A101 ကိုစျေးနှုန်းချိုသာသော်လည်းစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှုကိုဆန်းစစ်သည် [ဗွီဒီယို]
ယနေ့တွင်သင့်အား Uhans A101 - Tribute to NOKIA၊ မယုံနိုင်စရာကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များပါ ၀ င်သောစျေးနှုန်းချိုသာသောပစ္စည်းကိုယူဆောင်လာပါမည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခလုတ်မပါဘဲ Samsung Galaxy S8?
Google Pixel ၏အခြေခံစံနှုန်းများသည်၎င်းကိုအလွန်ကောင်းသောနေရာတွင်မထားပါ
စျေးကွက်သို့ရောက်ခါစ Google Pixel တွင်ပထမဆုံးပြုလုပ်ထားသောအခြေခံစံနှုန်းများ၏ရလဒ်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်ကြည့်ရှုမည့်နေရာ။
Google Pixel, လူတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်ပေမယ့်ဘယ်သူမှ ၀ ယ်မှာမဟုတ်ဘူး
၎င်းသည် Apple နှင့် Samsung တို့တံဆိပ်ခတ်ထားသောဈေးကွက်၏တံခါးကို ၀ င်ရောက်ရန်အအောင်မြင်ဆုံးနည်းလမ်းမဟုတ်ကြောင်းသိရန်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
"Really Blue" အရောင်ရှိ Google Pixel ကိုအမေရိကန်၌သာရနိုင်သည်
တကယ်တော့အပြာရောင်ရှိတဲ့ Google Pixels ကိုအမေရိကန်မှာရောင်းချရုံသာမကအခြားနိုင်ငံများစွာကိုလည်းပါရောင်းချသွားမှာပါ။
GTA5သည် Samsung Galaxy Note7အတွက်ဗုံးများကိုပြောင်းလဲရန်ခွင့်ပြုသည်
mods များကိုကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် Grand Theft Auto7ရှိ Galaxy Note5ကိုဗုံးများသို့မဟုတ်လက်ပစ်ဗုံးများအဖြစ်သုံးနိုင်သည်
စပိန်နှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းသည် WhatsApp အချက်အလက်စုဆောင်းမှုကိုလည်းစုံစမ်းလိမ့်မည်
စပိန်နှင့်ယူကေသည်ဂျာမနီ၏ခြေရာကိုလိုက်လိုပြီး WhatsApp နှင့် Facebook မှအချက်အလက်ကောက်ယူမှုကိုစတင်စုံစမ်းခဲ့သည်။
Google သည်၎င်း၏ Google Pixel တွင်မေ့လျော့သောအရာများနှင့်သာမန်အဆင့်သို့ပြောင်းလဲစေသောအရာများ
Google Pixel သည်တရားဝင်ဖြစ်ပြီး၊ သူတို့သည်ကြီးမားသောဆိပ်ကမ်းများဖြစ်သော်လည်းဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့ပြောသောအရာများမှာသူတို့မရှိသည်။
လေယာဉ်ပေါ်ရှိနောက်ဆုံးပေါ် Galaxy Note7အဖြစ်အပျက်ကို Samsung ကတုံ့ပြန်သည်
ဤရွေ့ကား Motorola စမတ်ဖုန်းများမှာ Android 7.0 Nougat ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်
မည်သည့် Motorola ထုတ်ကုန်များက Android 7.0 Nougat သို့မွမ်းမံမှုကိုလက်ခံမည်ကိုသင်သိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့စာရင်းကိုယူဆောင်လာပြီးသင့်အတွက်ရှာဖွေပါ။
Samsung Galaxy Note7သည်လေယာဉ်မထွက်ခင်မီးမိနစ်အနည်းငယ်ကြာသည်
ဒီဟာက Samsung Galaxy Note7ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ ...
iPhone7သစ်၏ဒီဇိုင်းကို iPhone5အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန်
ယူကျုးဘ်သုံးစွဲသူတစ် ဦး သည်သူ၏လှပသော iPhone7မော်ဒယ်အားဤဗေဒပြောင်းလဲမှုကိုစတင်ခဲ့သည် ...
Apple သည် iPhone7ဝယ်လိုအားမြင့်တက်မှုကိုဆက်လက်မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါ
လွန်ခဲ့သောအချိန်က Apple သည် iPhone7ကိုတရားဝင်တင်ခဲ့သည်၊ သို့သော်ယနေ့တွင် ၀ ယ်လိုအားမြင့်မားစွာဖြည့်ဆည်းရန်၎င်း၏ပြproblemsနာများဆက်လက်ရှိနေသည်။
Xiaomi ကနှစ်ချက်ကင်မရာကိုအတည်ပြုသောစာသားအတိုင်း Mi Note2ကိုထပ်မံပြသသည်
Xiaomi ကမျှော်လင့်ထားသည့် Mi Note2၏နောက်ကွယ်ကင်မရာကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏ဒီဇိုင်းကိုကြည့်ရှုနိုင်ပြီးနောက်ကင်မရာနှစ်ဆကိုအတည်ပြုနိုင်သည်။
iPhone7နဲ့ iPhone7Plus ဟာ AnTuTu အဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်
AnTuTu အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အသစ်ကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ထားပြီး ဖြစ်၍ iPhone7နှင့် iPhone7Plus တို့သည်ကြီးမားသောအားသာချက်ဖြင့်ပထမရာထူးနှစ်ခုကိုရယူထားသည်။
Xiaomi Mi Note2ရဲ့ဂရုတစိုက်ဒီဇိုင်းကိုပြသတာကိုနောက်တဖန်တွေ့နိုင်ပါတယ်
တရားဝင်တင်ဆက်မှုအပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် Xiaomi Mi Note2ကိုထပ်မံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး၎င်းသည် iPhone7၏ဒီဇိုင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည့်ဂရုတစိုက်ဒီဇိုင်းကိုပြသထားသည်။
ကနေဒါမှအော်ပရေတာတစ် ဦး က Google Pixel အသစ်ကို၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ပြသသည်
ကနေဒါအော်ပရေတာသည် Google Pixel ကိုပြသခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်းမနက်ဖြန်ဂူဂဲလ်သည်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်အသစ်များကိုတရားဝင်တင်ဆက်လိမ့်မည်။
လေကြောင်းလိုင်းတွေကသင့်ကို Galaxy Note7နဲ့ပျံသန်းခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်သည်
ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာပြီးကန ဦး ပြproblemsနာများကျော်လွှားပြီးသည်နှင့်လေကြောင်းလိုင်းများသည် Galaxy Note ဖြင့်ပျံသန်းခွင့်ပြုထားသည်။
bq သည် Aquaris U အကွာအဝေးကိုသက်တမ်းတိုးပြီးပရိသတ်အားလုံးအတွက်စျေးနှုန်းဖြစ်သည်
bq သည်လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က၎င်း၏ Aquaris U အကွာအဝေးကိုတင်ပြခဲ့သည်။ အလွန်သေးငယ်သောစျေးနှုန်းများဖြင့်ထူးခြားသောလက္ခဏာများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Aquaris U အကွာအဝေးတွင်ပါဝင်မှုအနည်းငယ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြလိမ့်မည်။
LeEco သည် Le Pro 500.000 ၏ယူနစ် ၅၀၀,၀၀၀ ကို ၁၅ စက္ကန့်အတွင်းရောင်းချသည်
LeEco ၏ terminal အသစ်ဖြစ်သော Le Pro3သည် ၁၅ စက္ကန့်အတွင်းတွင်ယူနစ် ၅၀၀၀၀၀ ကျော်ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။
လာမည့် iPhone 8 တွင်ဖန်ခွက်ကျောနှင့်သံမဏိအနားရှိလိမ့်မည်
KGI မှလေ့လာဆန်းစစ်သူ Ming-Chi Kuo ၏ပြောကြားချက်အရ Apple သည် iPhone 8 မော်ဒယ်များတွင်သံမဏိကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီး Aluminum 7000 ကိုဆက်လက်အသုံးပြုသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ကနေဒါကုမ္ပဏီ BlackBerry ၏ဟာ့ဒ်ဝဲဌာနခွဲကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ကြောင်းအတည်ပြုပြီး၎င်းသည်၎င်း၏နောက်ထပ်ဆိပ်ကမ်းများထုတ်လုပ်မှုကိုတတိယပါတီများလက်ထဲအပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဥရောပရှိ Samsung Galaxy Note7ကိုအောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်တွင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်တို့သည် Samsung Galaxy Note အသစ်အတွက်စတင်ရောင်းချမှုနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းများအားလုံးကိုငါတို့အားမျှဝေလိုက်သည်။
Google Pixel နှင့် Pixel XL ၏ပုံရိပ်အသစ်သည်၎င်း၏အရွယ်အစားကိုပြသသည်
iPhone7Jet Black ဟာစုဆောင်းသူရဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ
Jet Black သို့မဟုတ် Glossy Black မှ iPhone7သည် Apple ရင်ဆိုင်နေရသောထုတ်လုပ်မှုပြtoနာများကြောင့်ဈေးကွက်သို့ကျဆင်းလာသည်
အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်တွင် Apple သည် Q27 ၏ဘဏ္ofာရေးဆိုင်ရာရလဒ်များကိုကြေငြာလိမ့်မည်
အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် Cupertino အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီသည်စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်တွင်အဆုံးသတ်မည့် ၂၀၁၆ ဘဏ္fiscalာရေးနှစ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်စီးပွားရေးရလဒ်များကိုတင်ပြလိမ့်မည်
BlackBerry DTEK60 သည်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်များဖြစ်သည်
BlackBerry ပရောဂျက်အသစ်တွင်ဘာတွေပါဝင်တယ်ဆိုတာကို DTEK60 "Argon" ဟုလူသိများသည်။ Android နှင့် BlackBerry အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်လောင်းကစားဖြစ်သည်။
Xiaomi Mi5s နှင့် Xiaomi Mi5s Plus တို့သည် Snapdragon 821 အသစ်နှင့်ပထမဆုံးမိုဘိုင်းဖုန်းဖြစ်သည်
Xiaomi Mi5S သည်အမှန်တကယ်ရှိပြီးသား၊ Apple ၏ iPhone အသစ်ကဲ့သို့ Snapdragon 821 အသစ်နှင့် Plus ဗားရှင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
Google မှ Pixel နှင့် Pixel XL ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတရုတ်နိုင်ငံမှစစ်ထုတ်သည်
ဂူဂဲလ်စမတ်ဖုန်းအသစ်များ၏အစစ်အမှန်စွမ်းအားကိုသင်သိချင်လျှင် Gadget News ဆောင်းပါးကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ပါ။
Google ၏ Nexus မိသားစုသည်ဆက်လက်နေထိုင်နိုင်သည်
ကောလာဟလအသစ်များအရ Google သည် Nexus မိသားစုအတွင်းမှထုတ်ကုန်များကိုဆက်လက်ထုတ်လုပ်နိုင်လိမ့်မည်
Samsung က Note အတွက်စပီကာတံဆိပ်ကိုမူပိုင်ခွင့်ပြုသည်
လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်က Samsung မှ Korean မှမူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။
Surface ဖုန်းတွင် Intel Kaby Lake ပရိုဆက်ဆာထည့်နိုင်သည်
Surface Phone နှင့်ပတ်သက်သောကောလာဟလအသစ်များအရ၎င်းသည် Microsoft Terminal အသစ်သည် Intel Kaby Lake ပရိုဆက်ဆာနှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်ဟုဆိုကြသည်
Samsung Galaxy S8 တွင် Exynos 8895 ပရိုဆက်ဆာနှင့် Mali-G71 တို့ပါရှိသည်
Samsung Galaxy S8 အသစ်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုရောက်ရှိခြင်းသည်ရပ်တန့်သွားခြင်းမရှိဘဲ၊ သတင်းအသစ်တွင် Exynos 8895 နှင့် Mali-G71 အကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။
ဖြန့်ချိခဲ့ကြသော iPhone မော်ဒယ်အားလုံး၏မြန်နှုန်းနှိုင်းယှဉ်
ပြီးခဲ့သည့် ၉ နှစ်အတွင်း Apple မှစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သော iPhone မော်ဒယ်အားလုံး၏ထူးခြားချက်များကိုနှိုင်းယှဉ်ပြသမည်။
Samsung Galaxy Note7ကိုဥရောပတွင်နိုဝင်ဘာလတွင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်
Samsung Galaxy Note7ရဲ့အမှုအရာတွေနဲ့ဆက်ပြီးဆက်သွယ်နေ ဦး မှာဖြစ်ပါတယ်။
Asus Zenfone3ကိုစပိန်နိုင်ငံသို့ယူရို ၁၉၉ ဖြင့်ရောက်ရှိသည်
Asus သည် Zenfone စီးရီး၏ဆိပ်ကမ်းအသစ်သုံးခုကိုတင်ပြခဲ့ပြီးယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ကောင်းသောစျေးနှုန်းရှိသည်။
ဘလက်ဘယ်ရီသည်အကောင်းဆုံးအချိန်ကိုဖြတ်သန်းနေခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်၎င်း၏ hardware ပိုင်းခွဲခြင်းကိုပိတ်ရန်နှင့်မိုဘိုင်းစျေးကွက်မှပျောက်ကွယ်ရန်လုံလောက်မှုမရှိဘူးလား၊ သို့မဟုတ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်လော။
LeEco Le Pro3သည်ရယ်မောစရာကောင်းသောအဆင့်မြင့်ဖြစ်သည်
LeEco Le Pro3သည်စမတ်ဖုန်းစျေးကွက်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်သည့်တရုတ်ကုမ္မဏီ LeTV မှထုတ်လုပ်သည့်အလွန်ကောင်းမွန်သည့်ကိရိယာတစ်ခုအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံးပြောပြသည်။
Google Maps က Android မှာကျွန်ုပ်တို့တည်နေရာကိုပြသပုံကိုပြောင်းလဲပေးပါတယ်
Android အတွက်ဂူဂဲလ်မြေပုံများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တည်နေရာကို Android တွင်ပြသထားသောနည်းကိုပြောင်းပြီးမြှားသေးလေးမှмаяသို့ပြောင်းသည်။
Samsung အပါအ ၀ င် Samsung Galaxy S7 ကို ၄၅၁.၈၉ ယူရိုအပါအ ၀ င်ရေကြောင်းအပါအ ၀ င်
သတိထားပါ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းအားအကြောင်းပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေတဲ့နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းနဲ့မနီးစပ်ပါဘူး ...
မိုက်ကရိုဆော့ဖ်သည်ထွန်းသစ်စဈေးကွက်များအတွက် Nokia 216 ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်
အိန္ဒိယနိုင်ငံကဲ့သို့သောထွန်းသစ်စနိုင်ငံများအတွက်ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားသည့် Nokia 216 ဖုန်းအသစ်ကို Microsoft မှစတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်။
iPhone7ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်သည်ဒေါ်လာ ၂၂၀ ဖြစ်သည်
iPhone7ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကတော့ $ 200 ထက်အနည်းငယ်ပိုနေပါတယ်။ ဒီပမာဏက R&D ကုန်ကျစရိတ်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ...
Relax သည် Samsung Galaxy Note7ကိုပေါက်ကွဲစေသည့်ယူနစ်အသစ်များမဟုတ်ပါ
ပြီးခဲ့သည့်သီတင်းပတ်ကုန်ပိုင်းတွင် Samsugn Galaxy Note7၏ယူနစ်အတော်များများသည်မီးဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေဆဲဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းယူနစ်များသည်မကောင်းသောပစ္စည်းများမဟုတ်ပါ။
တကယ့်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်လို Google Allo ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ
Google Allo ဟာဂူးဂဲလ်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျပို့စနစ်အသစ်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်မိမိကိုယ်ကိုအပြည့်အဝနှစ်မြှုပ်ခြင်းနှင့် WhatsApp၊ Telegram နှင့်အခြားသူများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်လိုသည့် application တစ်ခုဖြစ်သည်။
လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်စွာဖြင့် Blackberry မိုဘိုင်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များပေါက်ကြားခဲ့ပြီး၊ Argon ဟုလူသိများသောနောက်ဆုံးအားဖြင့် Blackberry DTEK60 ...
ဒီနေ့ဒီဆောင်းပါးမှာသင်ဘာကြောင့် iPhone ကို ၀ ယ်သင့်သလဲဆိုတာကိုဒီဆောင်းပါး ၇ မှာပြသပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့တောင်မှဘာမှမစဉ်းစားဘဲမဝယ်ဘဲထားသင့်တယ်။
iOS 10 ကိုထောက်ပံ့ထားသောထုတ်ကုန်များ၏ ၃၄% တွင်ထားပြီးဖြစ်သည်
iOS 10 သုံးစွဲမှုနှုန်းသည်ကြီးမားသောနှုန်းထားများဖြင့်ဆက်လက်တိုးတက်နေပြီး Android နှင့်မတူသည်မှာကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုလေ့ရှိကြသည်။
Google Trips သည်ခရီးသွားလာသူအများဆုံးအတွက်မကြာသေးမီကတင်ပြခဲ့သောအက်ပလီကေးရှင်းသစ်ဖြစ်သည်၊ အော့ဖ်လိုင်းအလုပ်လုပ်သည်
ဤရွေ့ကား Note7သစ်အတွက် Samsung ကထည့်သွင်းပြုပြင်မွမ်းမံဖြစ်ကြသည်
Samsung Galaxy Note7၏ယူနစ်အသစ်များတွင်ပါ ၀ င်သည့်ပြောင်းလဲမှုများအကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောမည့်နေရာသည်သူတို့ဘက်ထရီများတွင်ပြproblemsနာမရှိပါ။
iPhone7နဲ့7Plus အသစ်ကိုဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
iPhone7နှင့် iPhone7Plus အသစ်များကိုမည်သည့်နေရာတွင် ၀ ယ်ယူရမည်ကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြောပြသည်၊ သို့သော်သင်ရရှိနိုင်သည့်ယူနစ်တစ်ခုကိုရှာရန်သင့်အတွက်အလွန်ခက်ခဲလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ကြိုတင်သတိပေးထားပြီးဖြစ်သည်။
Play Store တွင်ဒေတာနှုန်းထားများကိုသိမ်းဆည်းရန်ဂူဂယ်လ်ကကူညီပေးလိုသည်
အသုံးပြုသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့ download လုပ်လိုသော app ၏အရွယ်အစားကိုအချိန်နှင့်အမျှသိရှိနိုင်မည့်လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်တစ်ခုကို Google ကစတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းကို data သို့မဟုတ် Wi-Fi connection မှတစ်ဆင့်ပြုလုပ်လိုသည်။
Huawei Mate9ကိုနိုဝင်ဘာ ၈ ရက်တွင်တရားဝင်ပြသနိုင်သည်
မျှော်လင့်ထားသည့် Huawei Mate ကိုနို ၀ င်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင်မတူညီသောမျိုးကွဲ ၄ မျိုးအထိတင်ပို့နိုင်ခဲ့သည်။
ယခုအပတ်တွင် Google Allo ကိုရနိုင်သည်
Google Allo သည် Evan Blass ၏အဆိုအရ Google အနေဖြင့်ယခုသီတင်းပတ်အတွင်းဖြန့်ချိမည့် instant messaging app သစ်ဖြစ်သည်။
Surface Phone မှာ fingerprint sensor တစ်ခုပါလိမ့်မယ်
မိုက်ကရိုဆော့ဖ်၏မူပိုင်ခွင့်အသစ်အရ Surface Phone တွင်လက်ဗွေဆင်ဆာတစ်ခုတပ်ဆင်ထားနိုင်ပြီး၎င်းသည်တစ်ခုထက်ပိုပြီးအံ့အားသင့်စေနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။
Galaxy Note7ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင်ပြန်လည်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်
လူတိုင်းနီးပါးအတွက်ကောင်းသောသတင်းမှာစက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့တွင် Galaxy Note 21 ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ထပ်မံရောင်းချတော့မည်ဖြစ်သည်။
သင်၏လစာကို iPhone7၀ ယ်ရန်မသင့်သောအကြောင်းပြချက် ၇ ချက်
သင်သည် iPhone7ကိုဝယ်ယူရန်စဉ်းစားနေပါသလား။ ဒီနေ့မင်းရဲ့လက်ကိုပေးပြီးမင်းရဲ့လစာကို iPhone အသစ်မှာဘာကြောင့်ဖြုန်းသင့်�